ဒေါသစိတ်ကို အမြန်ထိန်းချုပ်နည်း ….. – Candle Myanmar
ဒေါသစိတ်ကို အမြန်ထိန်းချုပ်နည်း …..
အခုတစ်လော အိမ်ထဲမှာဘဲနေရတာတွေများတော့ စိတ်တွေလည်း အရမ်း မွန်းကြပ်နေတဲ့ ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလမှာ မိသားစုချင်းရန်ဖြစ်တာတွေ ၊ ချစ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်တာတွေ များပြားတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အချိန််မှာ ဒေါသထွက်တာတွေ ရန်ဖြစ်ချင်တာတွေ စိတ်ကအရင်ကထက် ပိုမတည်ငြိမ်ဘဲ ရန်ဖြစ်ရင် အကြီး အကျယ် ဖြစ်တာ ၊ အရမ်းပြောလိုက်မိတာတွေ ရှိမှာပါနော်။ ဒီလို အချိန်တွေမှာ ဒေါသကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးသွားပါမယ်နော်။
1. ဘယ်သူ့ကို ဒေါသထွက်နေလဲ အရင်စဉ်းစားပါ။
ကိုယ် ဒေါသထွက်နေတဲ့ သူက အကြီးလား၊ မိသားစုလား ၊ ချစ်သူလား ဆိုတာ ခေါင်းထဲ ရှိအောင် အရင်လုပ်ပါ။ မိသားစု ၊ အကြီးဆိုရင် လျော့သင့်တာ လျော့ရပါမယ်။ ချစ်သူဆိုရင်လည်း ကိုယ်ချစ်ရသူမို့ နစ်နစ် နာနာတွေ မပြောမိအောင် အရင် သတိထားရပါမယ်။
2. ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စကိုဘဲအာရုံထားပါ။
တစ်ယောက်ယောက်ကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရှိသမျှ လူတွေကို လိုက် ပြသာနာရှာတာက ကောင်းတဲ့ အကျင့်မဟုတ်ပါဖူးနော်။ တစ်ခါတစ်လေ ထပ်ရှာလိုက်တဲ့ ပြသာနာတွေက ပိုကြီးသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်လို့ ဒေါသထွက်လာရင် တစ်ယောက်တည်းနေ လိုက်ပါ။
ဖြစ်နေတဲ့ ပြသာနာထဲက နေ ဘေးထွက်လိုက်ပါ။ ဒါက ယောကျာ်းလေးတွေ သုံးတတ်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။ မိန်းကလေးတွေ အတွက်တော့ နည်းနည်းခက်ပင်မဲ့ ပြောနေတဲ့ စကားတွေကို ရပ်လိုက်ပြီး တခြားတစ်ခုခု ပြောင်းလုပ်လိုက်ပါ။
4. နာအောင် ပြောချင်တာကို ထိန်းပါ။
ဆဲဆိုတဲ့ စကားတွေ ၊ တစ်ဖက်သားကို နာကျင်စေမဲ့ စကားတွေဆိုရင် စာပို့နေရင်းဖြစ်ဖြစ် ပြောခါနီးဖြစ်ဖြစ် ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ ဒေါသထွက်နေချိန်က ဘာမှ မမြင်တော့တာ မှန်ပင်မဲ့ ဒီ တစ်ခုကိုတော့ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ပြောမိပြီးသွားရင် တစ်ဖက်လူက နာသွားတာရယ် ကိုယ်က အားနာရတာရယ် နှစ်ခုဘဲ ကျန်ခဲ့လို့ပါ။ ရိုက်လိုက်တဲ့ စာကို အချိန် ၅စက္ကန့်လောက် မပို့ဘဲထားပါ။ တွေးလိုက်တဲ့ စကားတွေကို လည်း ၅စက္ကန့်လောက် အစအဆုံးပြန်တွေးကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန် အတွင်းမှာ ပြောချင်စိတ် ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဆဲမိတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီနည်းလေးသုံးပါ။
ဖျော်ရည် ၊ ချိုချဉ် ၊ ကိတ် ကြိုက်တာ စားလို့ရပါတယ်။ အနားမှာရှိတဲ့ ချိုတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို စားလိုက်ပါ။ ဒါကတော့ ထွက်နေတဲ့ ဒေါသတွေကို အမြန် ရပ်စေနိူင်တဲ့ နည်းလမ်းပါနော်။
ကြားမိတိုင်း ဝမ်းနည်းတဲ့ သီချင်းတွေကို Save ထားပါ။ ဒေါသ အရမ်းထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီသီချင်းတွေ နားထောင်လိုက်ရင် Mood ပြောင်းသွားမှာဖြစ်လို့ ဒါကလည်း အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါနော်။
ဒါကတော့ နေ့တိုင်းလုပ်ရမဲ့ အကျင့်ပါ။ စိတ်ကို နေ့တိုင်း ၅ မိနစ်လောက် ငြိမ်အောင် အမြဲ လုပ်ပါ။ ဒါဆို ဒေါသထွက်တဲ့ အချိန်တွေကျရင် ဘယ်လို အမြန်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
8. မျက်စိမှိတ်ပြီး ၃ မိနစ်ငြိမ်ပါ။
တကယ်တမ်းစိတ်အရမ်းတိုလာရင် နံပါတ်တွေ ရေဖို့က မဖြစ်နိူင်တော့ပါဖူး။ အလွယ်ဆုံးကတော့ မျက်စိမှိတ်ပြီး မိနစ်ပိုင်းလောက် ဘာမှ မတွေးဘဲ ငြိမ်နေလိုက်ပါ။ ဒါက ဘယ်အချိန် မဆို သုံးလို့ ရတာမို့ ဒီနည်းလေးလည်း အဆင်ပြေပါတယ်နော်။
နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းပင်မဲ့ အရမ်းဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပြုံးလိုက်တာက ဒေါသကို အနည်းငယ်လျော့စေပါတယ်။ တဖက်သူနဲ့ ရှိနေတဲ့ အချိန်မှာလည်း ကိုယ် အရင် ပြုံးလိုက်တာက သူ့ဖက်ကလဲ ထပ်ပြောမဲ့ စကားတွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ဒီနည်းလေးသုံးဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော်။
ဒါက ဒေါသစမဖြစ်အောင် တားတဲ့နည်းပါ။ ကိုယ်မှန်တာ သိနေရင် ငြိမ်နေလိုက်ပါ။ အမှားသိတဲ့ သူကို အမှားဘဲ ဆက်သိနေအောင် ထားထားလိုက်ပါ။ ကိုယ်မှန်ကြောင်းကို လုံလောက်တဲ့အကြောင်းအရာ ပြောပြီးတာတောင် ဆက်ငြင်းနေရင် လွှတ်ထားလိုက်ပါ။ သူပြန်သိတဲ့ အချိန်ကျရင် သူ့ဘာသာရှက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အခုနည်းလမ်းတွေက ဒေါသအရမ်းထွက် လာချိန်မှာ ရပ်ပစ်ဖို့ ၊ တားဆီးဖို့ နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ လိုတာထက် ပိုတဲ့ ဒေါသ က ကျန်းမာရေးကို အများကြီး ထိခိုက်စေတာမို့လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်တဲ့ အနေနဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဘဲ ကြည့်ပြီး ဒေါသကို ရအောင် ထိန်းကြည့်ပါနော်။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင် ကိုယ်ရော ဘယ်လို နည်းတွေနဲ့ ဒေါသကို ထိန်းချုပ်လဲဆိုတာ ပြောပြခဲ့ဦးနော်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသိအောင်ပြောပြလိုက်ဦးနော်။
Previous: မိန်းမတိုင်း ဒီလိုအိပ်မက်မက်ဖူးကြမယ်
Next: လွယ်လွယ်မချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ကောင်လေးတွေ ဘာကြောင့် အရူးအမူးဖြစ်တာလဲ